Turquie - Vatican:MIHAZAKAZAKA MIFANDRAY AMIN’I MADAGASIKARA -
AccueilRaharaham-pirenenaTurquie – Vatican:MIHAZAKAZAKA MIFANDRAY AMIN’I MADAGASIKARA
Tsy niandry ela fa vao niandoha ny taona, dia efa nihazakazahan’ireo firenen-dehibe toa an’i Turquie sy Vatican ny fanamafisana ny fifandraisana amin’i Madagasikara. Amin’ity volana Janoary ity avokoa no ho avy eto ny solontenan’izy ireo. Ho an’i Torkia manokana, dia ny filoha Erdogan Recep Tayyip mihitsy no ho tonga eto miaraka amin’ny delegasiona an-jatony ahitana mpandraharaha ara-toekarena sy teknisiana maro.
Mpikambana ao anatin’ny G20 ( firenen-dehibe goavana maneran-tany) ny firenena Tiorka ary laharana faha-17 amin’ireo tany manan-karena indrindra. Ny firenena azo antoka amin’ny fampiasam-bola no hihazakazahany voalohany ka isan’izany i Madagasikara. Hiompana indrindra amin’ny fiaraha-miasa ara-toekarena rahateo ny fitsidihana hataon’i Erdogan eto amintsika. Nanokatra varavarana ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara tokoa ny fahombiazan’ny ezaky ny fitondrana malagasy nandritra izay nitantanan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny firenena izay.
Mba nanao ny ezaka nataony ihany ireny fitondrana nifandimby teto ireny saingy mbola tsy nandray filoham6pirenena avy amina firenen-dehibe tahaka izao anatin’ny voalohan’ny taona tahaka izao.
Amin’ity volana jona ity koa no ho avy eto amintsika ny sekreteram-panjakan’i Vatican, ny Cardinal Parolin. Tanan-kavanan’i Pape François mihitsy izy io raha ny laharana araka ny arofenitra. Tafiditra indrindra amin’ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny Firenena roa tonta ( Madagasikara -Vatican ) io fahatongavany io. Tsy mba tongatonga fahatany amina firenena iray izay itony iraky ny Vatican itony. Efa midika ho tsodrano lehibe ho an’ilay firenena vangiany moa ny fihetsika tahaka izao. Tafiditra amin’ny fanamarihana ny faha- 50 taonan’ny fifandraisan’ny firenena roa tonta koa ity fitsidihan’ny kardinaly Parolin eto Madagasikara amin’izao fiandohan’ny taona izao.
Maninona moa no mihazakazaka mankaty amintsika manamafy ny fifandraisany ny firenen-dehibe tahaka ireo ? Ny valiny dia tsotra : filoham-pirenena mikolokolo ny kolontsain’ny fananganana no mitondra ankehitriny ka hihazakazahan’ny firenen-dehibe ny miara-miasa aminy. Firenena lasibatr’izany fanonganam-panjakana izany koa mantsy i Torkia, ary ao anatin’ny fivoizana izany kolontsain’ny fananganana izany koa.